Microsoft Windows inorasikirwa pasi uye inodonha pasi pe90% | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Windows ndiyo inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa pane desktop, inosvika zviga pamusoro pe 90%. Mune mamwe niches akadai sevhareji, mainframes kana supercomputer, dura racho ndereGNU / Linux. Kana Microsoft haina kukwanisa kutonga mamwe masekisheni senge nharembozha, nekuti Windows Nhare yakundikana pamberi pesimba reApple yeApple neGoogle yeApple.
Linux yakamirira nyaya ndeye desktop, iyo ichiri kuramba, nekuti mune mamwe ese niches hutano hweprojekiti iyi hwakanaka kwazvo, iri muchidimbu muzvinhu zvese, kubva kumakina makuru ane simba, kusvika kumaTV akangwara, anopfeka, nezvimwe. Linus Torvalds anga achirota zvekukunda iyo desktop kwemakore, uye imwe nguva yapfuura akataura kuti aigona kuramba achirwa mamwe makore makumi maviri kuti azviite. Nekudaro, nhanho diki dzakanaka dzakatotorwa mune izvi ...
Apple yakundikana zvakare kutonga pane desktop, maMac ayo ane Mac OS X inoshanda system inomiririra mugove padhuze ne10% (9,57%), pamusoro pe 1,65% yeLinux. Asi kana tikatarisa mamwe masisitimu anoshanda seFreeBSD nekambani, mugove wacho unotonyanya. Icho chinonakidza chokwadi, sezvo yanga isati yagadzirwa kwemakore gumi, ndeyekuti Windows yarasikirwa ne1,68% mune isingasviki mwedzi uye yave pasi pe90%, ndinosimbisa, mugove usina kumboonekwa kwemakore.
Y kupunzika kunoerekana kwaitika hakukonzere Windows 10, sezvo zviri kwaari kuti Microsoft irikuwana imwe share. Izvi zvinoratidza kuti vanhu vazhinji uye vazhinji vari kukwidziridzwa kuWindows 10 kana kutanga nemamwe masisitimu anoshanda seMac OS X, GNU / Linux, FreeBSD, nezvimwe. Iyi haisi nhau huru ye linuxers, kwete yakaipa, ingori anecdote inonakidza nekuda kwenhamba yemakore iyo isina kuitika. Nekudaro, kuchine zvakawanda zvekushanda uye kurwira kukwidza iyo 1,65% ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Mahwindo anodonha pazasi pe90% kekutanga mumakore gumi
Kana vanhu vakarega kupa rubatsiro rwemahara kune software yekambani…. Microsoft ine matekinoroji pasi rese vachiita mabasa avo ... zvichitungamira mushandisi wevanoenda kuchinangwa chavo.
Ini ndinofunga kuti idzi nhamba dzakanganisa xD…. sezvo paine nyika dzese dzinoshandisa linux kumabasa avo maPC nenzvimbo dzekumba - ini ndinoona iwo manhamba kunge asiri iwo
Pindura kune trapladlemaster
Hongu uye kwete. Iwo maverengero akanaka, mupfungwa yekuti vanovakira kudzidza kwavo pakutengesa kwemidziyo ine pre-yakaiswa masystem. Saka isu tinogona kutaura kuti zvakanaka iyo pfungwa.
Asi panguva imwe chete hazvina kunaka, nekuti hazvitarise huwandu hwevanhu vanotenga Windows macomputer vozoisa Linux pairi (mune mbiri-bhutsu kana sehurongwa humwe chete), kana nhamba huru yemasangano ehurumende akasarudza shandisa maLinux masisitimu mumatunhu avo.
Uye hongu, iwo mabhuku emambure akaunzwa kubva kuhurumende, aive neLinux distro .. Zvino zita raenda, asi ivo vanoti rakashanda chaizvo.
Ndinofunga nhamba idzi hadzina kunaka. Kutanga, muChina chete, iyo inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa ndeyeGNU / LINUX, neiyo Red Flag chikuva, uye Deepin, iri kuwedzera kukura. Kuwedzerwa kwetekinoroji yeruzivo kuChina kuri padanho rinokurumidza, uye ndinotenda kuti mumakore mashoma, dudziro yeanonyanya kushandiswa mashandiro achave ari chaizvo munyika iyoyo. Kune rimwe divi, mumaonero angu ekuzvininipisa, ndinofunga kuti kuvhurwa kweWindows 10 kwakonzera vazhinji vashandisi veWindows kutamira kune mamwe masisitimu anoshanda. Izvo zvakavanzika zve Windows 10, kuchinjiswa kwedata rako pachako, nhoroondo yekusecha mubrowser, uye zvimwe infidences, yakawedzera kubutiro rekushambadzira rakaiswa neWindows 10. Zvisinei nekukokwa neiyo Inowanikwa pachena yemahara kuisirwa iyo Microsfot yakaitwa kune vashandisi veshanduro pamberi pe Windows 10, haina kuve nebudiriro inotarisirwa. Mwedzi yakati wandei yapfuura, uye kuchine huwandu hwakanyanya hwevashandisi vevashanduri vekare. Uye uyo anga asingade "kusimudzira" kuWindows 10, asiya Windows.
Ini handizive kuti iyo statistic inoenderana nei, asi ini ndinofunga kuti iyo GNU Linux quota yakakwira. Muguta rangu mune vanhu vazhinji vanoishandisa uye ini pachangu ndakwanisa kusimudzira kushandiswa uye kubudirira kwesisitimu kune vanhu vepedyo neni.
Iwo maverengera akavakirwa pakutengeswa kwemidziyo ine pre-yakaiswa masisitimu anonzwisisika, kune vazhinji vedu vanobvisa Guindows uye kushandisa distro, ini parizvino ndinoshandisa Voyager uye inoshamisira, ini handina kana hanya nehurongwa hwekudyara hwemitambo, Vashandisi veGNU / Linux pasina kupokana isu tiri kuzhinji pasirese.
Pindura kuna sinti3mpo
windows 3.1 ine 1 kubva pa200 pcs? nhamba iyi haina kunaka madzishe XD
"Hehe zoy a troll xd"
Kwete, mwana. Kune makambani akareba anomira chaizvo uye anodhura kwazvo mapurogiramu ekuverenga. Asi zvinoitika kuti kambani yakavatengesera software yakanyangarika, saka vanoshandisa vhezheni imwechete yeWindows kwenguva yakareba kuti varege kuputsa pfungwa. Supermarket makomputa anotamburawo nechirwere ichi, kazhinji.
Kure nekuve Windows, kudiki kana kusavimbika kwesisitimu uye kuti yapera sei, iro rakaipa bhizinesi maitiro.
Unoziva here kuti mangani maPC ari 0.5% emaPC ari pasirese? iwe unoziva nezve iyo pc iyo inomiririra? yepc isingawanzo pc kubva kune kambani ine zvachose accounting system iyo ichiri kukosha mune pesetas. Hazvigoneke. Tiri kutaura nezve mashoma mabhiriyoni pcs.
Ini handirambe kuti kune pc ine windows 3.1, asi zvakakomba? 1.5% linux 0.5% windows 3.1? hapana nyambo. Windows 2000 inofanirwa kuve yakawanda uye ivo vanongova ne0.05.
Chaizvoizvo hongu. Ndiri kuziva iwo manhamba, eperesenti uye emawindows aunotsanangura. Ndinoomerera, kune makambani mazhinji, kwete "chete" vaviri. Kuti ndikuudze kuti imwe chete kambani diki ine seti ingangoita mazana mashanu emakomputa anomhanya uye / kana kugadzirisa iyo vhezheni.
Ndiri muboka revanhu vakatenga laptop ine windows pre-yakaiswa, uye mushure memwedzi mishoma ndakaibvisa kuti ndiise linux (ini handicharangarira izvo distro, asi parizvino ndiri kushandisa Linux Mint pane ese ari maviri laptop uye desktop)
Simplicity Linux 16.04 iri pano